Slam yakakura yezvipo zvepoyi Inoponesa Upenyu hweBlack Legend - TELES RELAY
HOME » kambani Chirongwa chikuru chezvipi zvepvo chinoponesa hupenyu hwemhemberero ye baseball
Slam Guru yeZvipo Zvipo Inoponesa Upenyu hweBlack Legend
Cooney akambomutswa nekufonera kubva kumukuru wake kuenda kuDhipatimendi reMapurisa eNew York, achikumbira muchengeti wake kuti apindure pane njodzi yacho.
Kwemavhiki matanhatu anotevera, Cooney akauya kuzoshanda paGround Zero zuva rimwe nerimwe. Madota akanga achiri kumhanyira kumashure kwake sezvaainetseka kufema kuburikidza nemasikirini ekuvhiya nehombodo yake ye Glock 19 yakaiswa pachiuno chake.
Iye zvino, makore emakore 18, Cooney apfuura kupfuura kudanwa kwebasa kuburikidza kupa imwe yeitsvo dzake kumunhu asina kukwana.
Cooney akanga asingazivi kuti chiito chake chisingakoshi chaizotanga kuratidza mutsa unoshamisa wemutsa waizopedzisira uchengetedza hupenyu hwevanhu vaviri, kusanganisira iyo yebato guru revose.
Cooney, 45, weWaldale, NY, iye zvino ava mapurisa ePort Authority paLaGuardia Airport muQueens.
Pamwe nechishuvo chake chekubatsira, akataura kuti chisarudzo chake chekupa tsvete chaiva chido chekuripira mubairo wake wakanaka kuti wakaramba aine utano mushure meSeptember 11, apo vamwe vakatanga kupindura vakawana zvirwere zvinouraya uye vakarasikirwa noupenyu hwavo.
"Hazvina maturo chaiwo, hazvina kufanana nomunhu ari kunyanya kurwara, kana kana imwe nhau iri kugadzirisa chimwe chinhu chiri kutungamira ini," Cooney akaudza CNN zuva rake rokupedzisira. kushanda vasati vavhiyiwa uye mavhiki masere ekuzorora pamubhedha.
Cooney ndiye mupurisa we facto ane mhosva yekudzivirira uye kurongedza kugadziriswa kweVIP kupinda uye kubuda ndege.
'Chinhu chakanakisisa chinogona kuitika'
Kubatsira kwenguva yakareba nemazita makuru akadai sa Muhammad Ali, Rolling Stones, vatungamiri Bush naDonald Trump, vasati vatungamiri vake, Cooney anobatsira New York Mets kuti ayambuke ndege (kunyange zvazvo ari fan Yankees).
Cooney anonyanya kuzvikudza mukubatsira vamwe vevanhu vanoshamisa zvikuru vaanosangana navo, kuchengetedza mifananidzo yemifananidzo nyore nyore pa iPhone yake uye nekuisa chikwata chake kumapurisa.
Asi paanoisa junifomu yake muchikwangwani ichi pakupera kwezuva, New Yorker yekare inotora kumba kwake mutsa uye pfungwa yake yekushanda-zvisinei kuti ndiani.
"Ndave ndichifara nguva dzose nekubatsira vanhu," Cooney akaudza CNN. "Dzimwe nguva ibasa rakaoma, sekuvapa mirayiridzo kana kuvaratidza nzira uye kuvabatsira kuwana nzira yavo. Nguva nenguva unowana mukana wekuita zvinhu zvikuru, asi iwe hauzive chaicho chichaitika kubasa - zuva rega roga rakasiyana. "
Asingazivi kuti ndiani aizotanga kupa itsvo yake, Cooney akasimbisa Glock yake yeChipiri chekupedzisira pa 5 mangwanani, amai vake vasati vamuendesa kuvhiya.
Vamwe vatatu vatorwa vaizoenda kuchipatara kuti vazovhiyiwa panguva iyoyo.
Maawa maawa mashomanana gare gare, tsvete yemapurisa weCooney yaizove mafungiro omunhu anopisa moto, nokudaro nokuchengetedza hupenyu hwaAl Barbieri, ane makore anopfuura 55. Mune makore mana anozvipira moto nemuGlenwood Landing Fire Department muLong Island. Barbieri ave akawanikwa ane chirwere chepfungwa yeCNNX. Tsitsi dzake dzakabviswa.
"Ndakanga ndiri mukomana ane hutano hwakanaka, ndakanga ndichiri kushanda uye ndakapindura nhare. Nenguva isipi, ndini murume uyo anorwara, uye iwe hausiwe wakambove iwe murume anogara achirwara, "mupfuri wemoto akaudza CNN mushure mekuvhiyiwa kwake.
"Uye pandakaona kuti mukomana akandipa ini mupurisa ane makore 45, ndakanga ndisingasarudze munhu ari nani kuti ave mupi kwandiri. Izvo zvakafanana nechinhu chakanakisisa chakamboitika, "akadaro Barbieri.
Barbieri haachiswi dialysis iyo yave achivimba nayo kwemakore. Iye nemhuri yake vaizogara vachionga mukoma wake mubhuruu. "Mapurisa ari munyika nhasi uye vanodzima moto vanogonawo kuva nemasimba," akadaro Barbieri.
Thomas Buchta, Fire Chaplain uye shamwari yakareba kwenguva refu yeBarbieri, vakatsanangura kurwisana kubvumira Barbieri kuti adzore mafungiro ake, achiudza CNN Ndiyo mhinduro chete kumunyengetero "wakaramba usina mhinduro nzira yakareba kwazvo.
Chimbo chikuru chechipo
Mudzimu wokupa wakaramba uchidaro. Mudzimai waBarbieri, Debbie Barbieri, akanga apikira hono dzake kumurume wake, asi ropa rake rakasiyana.
Akasarudza kuendesa chipo chaCooney kuburikidza nekupa itsvo dzake kune mumwe munhu sechikamu che "pair exchange".
Chipiri Chakupedzisira, mune imwe chipinda chechipatara sevadzidzi vaviri vokutanga, tsvete yaDebbie Barbieri yakabviswa uye yakapiwa kune rimwe rudzi rwegamba.
Mhare yemutambo Ed Kranepool ndiye aizova mugashiri wekupedzisira weiyi slam guru yekupa.
Iye zvino akwegura 74, Kranepool yakadhonza 1969 mune chinangwa cheNew York Mets, ichivabatsira kukunda World Series uye kuwana zita rezita rokuti "Miracle Mets".
"Ndakanga ndine maqembu maviri akanaka muupenyu hwangu, Mets uye boka iri nhasi," Kranepool akati musi weChishanu mushure mokuvhiyiwa.
Kranepool angave ari pachinzvimbo chevanyori vaakange achida kusangana navo, asi pasinei nekusimbiswa kwake nekambani yeNeesis.
Chiziviso chakaitika muwiricheya mushure mokushanda.
Kranepool akasimuka kubva pachigaro chake - kidzo chaDebbie Barbieri iye zvino chikamu chake
Posing naKranepool, Cooney akatora imwe mufananidzo nemukurumbira. akabatsira.
Asi kukoshesa kweKanepool hakuregi ipapo.
Cooney akagamuchira chipo icho chaakati aizodada kuzviratidza varume vose kubasa paaidzoka - bhora rebhobho rakatevedzwa neMets Hall of Fame
Izwi rakanyora rinoti: "Brian, zvakanakisisa zvido. Ed Kranepool. 69 WS Fields. Ndinokutendai nekuponesa hupenyu hwangu! "
Icho chiyeuchidzo chinenge chiwedzerwa kuCooney's locker, uye seCooney akati, "ndiyo yakanakisisa autograph yenguva dzose".
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2019/05/17/us/kidney-donation-new-york-mets-beyond-the-call-btc/index.html